Maitiro ekuwana iyo 1Password 8 yeruzhinji beta pane yako iPhone kana iPad | Nhau dze iPhone
Ngirozi Gonzalez | 16/04/2022 10:00 | IPhone maapplication
Nezuro chaiye takakuudza kuti 1Password yakaburitsa chikuru papuratifomu update kusvikira zuva. Ndezve 1Password 8, app nyowani yakagadziridzwa kubva kutanga neCore yayo uye makuru maficha ayo Yatanga nguva yayo yebeta yeruzhinji. Nguva zhinji, idzi mhando dzebeta dzakachengeterwa boka rakasarudzwa revashandisi. Nekudaro, panguva ino munhu wese anogona kuwana iyo beta kuburikidza neApple's TestFlight chirongwa. Iwe unoda kuyedza iyo nyowani 1Password app iyo ichaburitswa zviri pamutemo mukupera kwegore? Tinokudzidzisa kuti ungazviita sei.
Edza 1Password 8 nekuwana iyo yeruzhinji beta nenzira iyi
Nzira yekuwana iyo yeruzhinji beta ye1Password 8 iri nyore kwazvo. AgileBits, mugadziri, anoshandisa Apple's TestFlight yeruzhinji beta chirongwa. Nehurongwa uhu, vanobvumira kupinda kune boka revashandisi vane chinongedzo chekuwana kune beta nezvinangwa zviviri. Chekutanga, kuti vanogona kushandisa chishandiso chitsva uye chechipiri, chavanozvipira kutumira mhinduro kugadzirisa iyo app.
Kuti uwane iyo yeruzhinji beta unongo fanirwa dhawunirodha Apple's TestFlight app inowanikwa paApp Store. Kana wapedza, pinda uye ugamuchire Mitemo neMamiriro. Gare gare, isu tichawana iyo chinongedzo chinotevera inova chinongedzo chekukoka kune 1Password 8 yeruzhinji beta.
Panguva iyoyo, peji yekutsanangura ye1Password 8 icharatidzwa uye mukana we "Isa". Mushure mekuisirwa, tinogona kudzoka chero nguva kuTestFlight kuenda tumira mhinduro nezve beta vhezheni nechinangwa chekuzivisa tsikidzi. Neiyi yeruzhinji beta vanovavarira kuyedza zvakanyanya app kuti vavimbise kushanda kwayo kwakaringana isati yatanga zviri pamutemo.
Iyo public beta haina huwandu husingagumi. zvichida mumaawa mashoma huwandu hwe beta hwakakwana uye hazvizoregi vashandisi vazhinji vaise iyo application. Muchiitiko ichocho, tichafanira kumirira kusvikira zvinhu zviviri zvaitika: vamwe vashandisi vanozvibvisa kana AgileBits inowedzera nhamba yevaongorori ve beta.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Maitiro ekuwana iyo 1Password 8 yeruzhinji beta pane yako iPhone kana iPad